Fampandrosoana isam-paritra : voasakana sy mitohana ny ao Soanierana Ivongo | NewsMada
Fampandrosoana isam-paritra : voasakana sy mitohana ny ao Soanierana Ivongo
Par Taratra sur 21/02/2017
Soanierana Ivongo, Renivohitry ny disitrika, nefa mitovy laharana amina kaominina ambanivohitra maro hatramin’ izao. Tsy tongatonga ho azy izany fa misy ny sakana tsy hisian’ny fampandrosoana ao an-toerana. Manginy fotsiny ny mpandraharaha tsy mandoa hetra sy tamberimbidy ho an’ny kaominina.
Renivohitry ny disitrikan’i Soanierana Ivongo ny kaominina ambanivohitra Soanierana Ivongo, azo sokajiana ho farany raha ao anatin’ny faritra Analanjirofo. Amin’ny maha kaominina azy, misy fokontany 17 ao aminy, voafidy ben’ny Tanàna, Ralaimamonjy Charles Hugues, amin’ny anaran’ny fikambanana Fivoy naorin’ny minisitry ny Tontolo iainana sy ekolojia, Ndahimanjara Johanita. Tsy misy fampandrosoana azo ianteheran’ny mponina ny ao an-toerana, tsy miditra ny vola avy amin’ny mpandraharaha sy ny mponina tokony handoa hetra. Mifanipaka ny hery roa eo anivon’ny kaominina, ny mpanatanteraka sy ny filankevitry ny tanàna.
Ny faran’ny herinandro teo, nanaovan’ny ben’ny Tanàna tatitra sy fanazavana ny antony tsy mampandroso ny kaominina. ” Miaiky aho fa tsy mandroso ny kaominina Soanierana Ivongo. Maro ny antony, anisan’izany ny tsy fandraisan’ny filankevitra fanapahan-kevitra momba izay tetikasa entina hanaovana asa fampandrosoana. Ohatra, ny tetikasa Pic2 hanamboarana ny seranan-tsambo sy lalana mamakivaky tanàna ; fangatahana orinasa mpivarotra solika, fanokafana banky, raha tsy hilaza afa-tsy ireo aloha” hoy ny ben’ny Tanàna, Ralaimamonjy Charles Hugues. Noho ny antony politika, sarotra ny mahazo fankatoavan’ireo mpikambana ao amin’ny filankevitra ny asa fampandrosoana naroso, araka ny fanazavan’ny ben’ny Tanàna,
“Hatramin’ izao, mbola tsy niverina aty aminay ny tamberimbidin’ny vokatra letisia” hoy ihany ny ben’ny Tanàna. Voalaza fa mirongatra mihitsy ny fanaovana “ticket” hosoka, handraofana vola avy amin’ireo mpitatitra sy mpandraharaha mampiasa ny seranan-tsambo sy tamberimbidy avy amin’ny vokatra lavanila sy jirofo.
Tonga hamaha olana ny fikambanana Sim
Ny 18 febroary teo, nampahafantarina ny fitsanganan’ny fikambanana Soanierana Ivongo Mandroso (Sim), tarihan’ny filoha mpanorina azy, Ramanantsoa Marcellin, tale iraisam-paritry ny fitantanam-bola Atsinanana sy Analanjirofo no zanaky ny disitrikan’i Soanierana Ivongo. “Ampy izay ny ady saritaka ifanaovan’ny mpitondra eto an-toerana. Atao izay hampandrosoana ity disitrika ity. Fikambanana ivondronan’ny olona rehetra teratany Malagasy sy vahiny manana finiavana hampandroso an’ i Soanierana Ivongo ny Sim“, hoy ny filohan’ny Sim, nandritra ny lahateniny tamin’ny fampahafantarana ny fijoroan’ny fikambanana.
Noporofoiny avy hatrany tamin’ny fanolorany solosaina hiasan’ny kaominina, indrindra amin’ny fanaovana karatany ; tsy maintsy atao ny fanelanelanana eo anivon’ny ireo banky izay mety afaka hametraka masoivohony sy amin’izay afaka mametraka toby fitsinjarana solika. Tandindomin-doza amin’io fivarotana solika tsy manara-penitra io ny Tanànan’i Soaniarana Ivongo.
Efa indroa vaky ny biraon’ny kaominina, very tamin’izany ny solosaina mirakitra ny karatany, anisan’ny antony mahatonga ny firongatry ny ady tany. Ho mpanelanelana eo amin’ny famahana olana rehetra noho izany ny Sim.